Daawo Sawiro: Wasiirka Diinta & Awqaafta oo booqday xujeyda Soomaalida ee ku sugan dalka Sacuudiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Daawo Sawiro: Wasiirka Diinta & Awqaafta oo booqday xujeyda Soomaalida ee ku sugan dalka Sacuudiga * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame on 30th August 2017
Wasiirka Diinta iyo awqaafta ee Xukuumada Somalia Iimaan Cabdullaahi Cali oo hogaaminaya wafdi ka socda dowlada oo qeyb qaadanaya Xajka sanadkan ayaa booqday xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan gudashada waajibaadka Xajka u jooga dalka Sacuudiga.
Soomaalida ka qeyb qaadaneysa xajka sanadkan oo tiradoodu kor u dhaafeyso 7 kun ayaa la dejiyey degaanada Safa iyo Marwa iyo deegaano kale oo ka tirsan goobaha barakeysan ee dalka Sacuudiga.
Wasiirka oo ay wehliyeen masuuliyiin uu ka mid ahaa Wasiir ku-xigeenka Awqaafta iyo arrimaha Diinta Cismaan Aadan Dhuubow, Senator Prof. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka tirsan aqalka sare ee Baarlamanka Somalia iyo xubno kale ayaa kuur galay xaalada Xujaajta Soomaaliyeed.
Waxay kulamo xog-wareysi ah la qaateen xujayda Soomaalida iyagoo weydiinayey adeegyada ay heystaan iyo haddii ay jiraan dhibaatooyin u baahan in wax laga qabto.
Sidoo kale, masuuliyiintan ayaa kormeeray goobta ay ka socota bixinta kaararka aqoonsiga ee xujayda Soomaaliyeed, isagoo howlwadeenada arintaas ku shaqada leh ka dalbaday iney saacado gudahood ku soo dhameeyaan bixinta kaararka aqoonsiga.